समाचार - पानी रिजर्भेन्ट VS WATER-REPELLENT VS WATERPROOF: DIFFERENCE के हो?
पानी रिजर्भेन्ट VS WATER-REPELLENT VS WATERPROOF: DIFFERENCE के हो?
हामी सबैले वाटरप्रूफ उपकरणहरू, पानी-प्रतिरोधी उपकरणहरू र पानी-रिपेलन्ट उपकरणहरू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनहरूमा वरिपरि फ्याँकिएका सन्दर्भहरू देख्छौं। ठूलो प्रश्न हो: के फरक छ? यस विषयमा धेरै लेखहरू लेखिएका छन्, तर हामीले पत्ता लगायौं कि हामीले हाम्रो दुई-सेन्टमा पनि हाल्नेछौं र उपकरणहरूको विश्वमा विशेष फोकस सहित सबै तीन सर्तहरूको बिचमा भिन्नतालाई नियालनेछौं।
सर्वप्रथम, आउनुहोस् हामी जलरोधक, पानी प्रतिरोधी, र पानी-विकर्षकको केहि द्रुत शब्दकोश परिभाषाहरूबाट सुरू गरौं, जुन अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोशले दिएको छ:
पानी प्रतिरोधी: केहि डिग्री पानी प्रवेश गर्न प्रतिरोध गर्न सक्षम तर पूरै छैन
पानी-विकर्षक: पानीले सजिलैसँग प्रवेश गर्न सक्दैन, विशेष गरी सतह कोटिंगको साथ यस्तो उद्देश्यको लागि उपचारको परिणामको रूपमा।
वाटरप्रूफ: पानीमा अभेद्य
पानी प्रतिरोधीको मतलब के हो?
पानी प्रतिरोधक तीनको पानी संरक्षणको तल्लो तह हो। यदि एक उपकरणलाई पानी प्रतिरोधीको रूपमा लेबल गरिएको छ भने यसको मतलब यो उपकरण आफै निर्माण गर्न सकिन्छ कि पानी भित्र पस्न यो धेरै गाह्रो हुन्छ, वा सम्भवतः यो धेरै हल्का पदार्थले ढाकिएको छ जसले सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। पानीको साथ एक मुठभेडबाट बच्नको उपकरणको संभावनाहरू। पानी प्रतिरोधी एक यस्तो चीज हो जुन तपाईंले हेर्ने बीचमा सामान्य रूपमा देख्नुहुन्छ, यसले औसत हात धुने वा हल्का वर्षा स्नानलाई प्रतिरोध गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ।
पानी-विकर्षकको अर्थ के हो?
पानी तर्काउने कोटिंग्स मूलतः पानी प्रतिरोधी कोटिंग्सबाट केवल एक कदम माथि छन्। यदि एक यन्त्रलाई पानी-विकर्षकको रूपमा लेबल गरिएको छ भने यसले वास्तवमा सम्पत्तिहरू राख्दछ जसमा, तपाईंले यसलाई अनुमान गर्नुभयो, पानीलाई हटाउनुहोस्, यसलाई बनाउँदै हाइड्रोफोबिक। पानी-विकर्षक उपकरणले पातलो-फिल्म न्यानो टेक्नोलोजीको कुनै किसिमको लेप हुने धेरै उच्च मौका खडा गर्दछ, त्यो भित्री हो, बाहिर वा दुबैमा, र तपाईंको औसत उपकरण भन्दा पानीमा खडा हुने राम्रो मौका छ। धेरै कम्पनीहरूले पानी-रिपेलेन्सी दाबी गर्छन्, तर यो शब्द भारी छलफल गरिएको छ किनकी एक टिकाऊ पानी विकर्षण विरलै छ र सबै प्रश्न र यससँग सम्बन्धित अप्रत्याशित तत्वहरूको कारण।
वाटरप्रुफको अर्थ के हो?
वाटरप्रूफको परिभाषा एकदम सीधा छ, तर यसको पछाडि अवधारणा छैन। वर्तमानमा, त्यहाँ वाटरप्रूफको रूपमा वर्गीकृत गर्न उपकरणको क्रममा स्थापित उद्योग मानक छैन। अहिले उपलब्ध सबैभन्दा नजिकको चीज, जहाँसम्म मूल्या scale्कन स्केलको सवाल छ ईन्ग्रेसन सुरक्षा रेटिंग स्केल (वा आईपी कोड)। यस मापनले आइटममा कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने सर्तमा ०-88 बाट आईटम रेटिंग दिन्छ पानी भित्र पस्नबाट, उर्फ पानी को प्रवेश। स्पष्ट रूपमा यस मूल्या rating्कन प्रणालीमा एक प्रमुख त्रुटि छ: HZO मा हामी जस्तै कम्पनीहरूको बारेमा के भने जसले पानीलाई नोक्सानबाट बचाउन पानीलाई उपकरणबाट बाहिर राख्दैनन् भन्ने चिन्ता गर्छन्? हाम्रो कोटिंग्सले पानी भित्रका उपकरणहरूलाई अनुमति दिन्छ, तर वाटरप्रूफ सामग्री हामीले उपकरणहरू कोट लगाउँदछौं पानीको क्षतिको कुनै सम्भावनाबाट तिनीहरूको सुरक्षा गर्दछ। यी कम्पनीहरूले एक सेवा प्रदान गर्दछ जुन आईपी मापन मापनको साथ उपयुक्त छैन, तर अझै पनि ती ग्राहकहरु को लागी समाधान प्रदान गर्न को लागी प्रबन्धन गर्छ तत्वबाट र डरलाग्दो "शौचालय द्वारा मृत्यु।" बाट सुरक्षा।
वाटरप्रूफ शब्द प्रयोग गर्नु धेरै कम्पनीहरूको लागि जोखिमपूर्ण कदम मानिन्छ। यो किनभने वाटरप्रूफ शब्दले प्रायः यो स्थायी अवस्था हो भन्ने विचारलाई संचार गर्छ र पानीसँग सम्पर्कको कारण जे पनि 'वाटरप्रूफ' भएको छ त्यो कहिले असफल हुने छैन - कुनै पनी स्थिति छैन।